पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले देखेका विमानस्थल सुधारका ३ विकल्प – Etajakhabar
२. त्रिभुवन विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान मात्र, आन्तरिकका लागि नयाँ विकल्प त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अब अन्तर्राष्ट्रिय उडान मात्रै गरिनुपर्छ । डोमेस्टिकतर्फको उडानका लागि विकल्प खोजिनुपर्छ । यसका लागि हामीले काभ्रेको धुलिखेल रोजेका छौँ । यस विषयमा छलफल अघि बढिसकेको छ । अबको सात दिनभित्र यसको टुंगो लाग्नेछ । त्यसो हुन सके त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडानको चाप स्वतः घट्नेछ ।
३. प्रदेशस्तरीय स्टेसन केन्द्र, पूर्व र पश्चिमका उडान उतैबाट मुलुकभर उडान भर्ने डोमेस्टिकतर्पmको केन्द्र पनि काठमाडौंमै छ । अब डोमेस्टिकतर्फका जहाज प्रदेशस्तरीय स्टेसन केन्द्रबाट पनि उड्ने व्यवस्था हुनेछ । जस्तो, पूर्वतर्फ उडान भर्ने जहाजका लागि विराटनगरमा स्टेसन केन्द्र राखिनेछ । पूर्वी नेपाल र आसपासका क्षेत्रमा उडान भर्ने जहाज त्यहीँबाट सञ्चालन हुनेछन् । पश्चिमतर्फ उडान भर्ने जहाजका लागि पोखरामा स्टेसन केन्द्र राखिनेछ । पश्चिम नेपाल र आसपासका क्षेत्रमा उडान भर्ने जहाज त्यहीँबाट सञ्चालन हुनेछन् । यसले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको अहिलेको चापलाई तत्काल नियन्त्रण गर्नेछ । यो काम सुरु भइसकेको छ । यो अन्तिम विकल्प होइन, तर तत्कालका लागि यसले पनि फरक ल्याउनेछ । केही दिनभित्रै जनताले यसको अनुभूति गर्न सक्नेछन् ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, बैशाख ११, २०७५ समय: ७:१८:२२